Ubuhle buhambisana nokunakekela imvelo | Ilanga News
Home Impilo Ubuhle buhambisana nokunakekela imvelo
Ubuhle buhambisana nokunakekela imvelo
BUYINI ubuhle uma kungabheke-lelwa imvelo ku-phinde kusizwe umphakathi? Lo mbuzo ube yingqikithi yenkulumo esigcawini esithathe izinsuku ezithathu ebesihlelwe ngabenkampani ebhekelele iziqholo nezobuhle, i-Unilever, lapho bekumenywe khona osaziwayo nabezi-ndaba abehlukene kuzodingidwa kabanzi ngokuba muhle nomthelela wakho.
Kulesi sigcawu kuphakanyiswe kakhulu igama labaqoqi bemfucuza (recyclers) njengabantu ababuqondayo ubuhle ukuthi kabugcini ngokuziphaqula nje kuphela kodwa kuqala ngokuba kunakekelwe imvelo.
“Singasho kanjani ukuthi siyazithanda kodwa sibe sicekela phansi imvelo. Ngisho iziphaqulo lezi esizisebenzisayo kumele sikuqaphele ukuthi kazinamthelela yini ongagcina sewulimaza umkhathi,” kusho uTony Mun-Gavin obhekelele ezokumaketha kwa-Unilever.
Kuningi obekuqukethwe yilesi sigcawu okuhlanganisa amathiphu okuzinakekela kwa-phinda kwe-thulwa neziphaqulo ezintsha.
Morrocan clay cleansers:
Abathandi bePonds bazokujabulela ukuzwa ukuthi
sekunesiphaqulo esisha esizoshintsha indlela abanakekela ngayo isi-khumba, okuyi-Mo-rrocan Clay Cleanser.
Lesi siphaqulo esisaludaka, sithakwe nge-mi-neral clay yaseMorroco kanti sinconywe kakhulu ngokumu-nca amafutha nokungcola okusala uma ugeza ubuso.
Dove Nourishing Secrets:
Ikhona ngempela imfihlo ecashe kulezi ziphaqulo zakwaDove okuyi-shampoo, yibody wash ne-lotion okuthakwe ngezithako ezahlukene okuwu-avocado, u-coconut nezimbali ezinamakha.
Okuqaphelekile wukuthi imikhiqi-zo yakwa-Unilever ifakwe ezigujini zopulastiki (packaging) owenziwe ka-busha (recycled) ophinde usetshenziswe futhi uma okuphakathi sekuphelile ukuba kwakhiwe izihlalo bese kunikelelwa abafundi abasezikoleni ezihlwempu.
Previous articleKubulawe usomatekisi emngcwabeni
Next articleUzolwela ukunqoba izicoco noSuthu